Kutya Tightwad Chipiri kune 2-21-17 - Iwo Akanakisa Mahara Mafirimu paWebhu - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Kutya Tightwad Chipiri kwe2-21-17 - Iwo Akanakisa Mahara Mafirimu paWebhu
by James Jay Edwards February 21, 2017
yakanyorwa na James Jay Edwards February 21, 2017
Hei Tightwads! Uri kuramba uchioma mukati meiyi ese madutu echando? Kana iwe uri mune imwe yenzvimbo dzenyika iyo iwe wakanamatira mukati, usadikitira. Iyi batch yemahara emafirimu iri padhuze neyako internet browser.
Pumpkinhead (1988), neruremekedzo United Artists.
Pumpkin musoro iri pamusoro pababa vane mwanakomana wavo mudiki anourawa neboka revanhu vakadhakwa vasina hanya nemabhasikoro. Vachishandisa rairo dzavakapihwa nemuroyi wekare, baba vanochema vanoshevedza dhimoni - Pumpkinhead - kutsiva chaiko. Yakagadzirwa muna 1988, Pumpkin musoro ndiyo yedhairekitori kutanga kweanozivikanwa mhedzisiro wizard Stan Winston, saka sechinhu chechisikwa, zvakanyanyisa kukosha kuona. Iyo zvakare ine Lance Henriksen mairi, kungoitira kuti dai iwe uchiri paruzhowa. Ipa Pumpkin musoro wachi (kana yekutarisazve, kana zvirizvo) chaiko pano paTubiTV.
Kukurudzira Kukura (2013), neruremekedzo Devolver Dhijitari Mafirimu.
Kutaura nezvezvisikwa…Kukurudzira Kukura firimu ra2013 pamusoro pemurume uyo, paakanga akarara pasi mushure mekundikana kuzviuraya, anowana sumbu rekutaura muchikona chemba yake yekugezera. Iyo mold inotanga kupa murume kuraira zvinoita sekushandura hupenyu hwake, asi nemutengo upi? Kukurudzira Kukura ingangoita seusina kujairika bhaisikopo sezvauchazowana, saka kana eclectic chiri chinhu chako, chaiko kukwira kwako. Jeffrey Combs zvakare nyeredzi senzwi rechimiro. Kubata Kukurudzira Kukura pano kuVudu.
Lake Placid 2 (2007), neruremekedzo Iyo Sci-Fi Channel.
Gungwa Placid 2
Zviripachena sequel ku Lake Placid, Gungwa Placid 2 inoona mamwe makuru maakarighi achidzoka kugungwa rezita kuti vadye vanhu uye vaparadze. Uyu 2007 mupiro ndeyeSci-Fi chiteshi yemuvhi bhaisikopo, uye ine B-cast kuratidza, ichitungamirwa naJohn "Bo Duke" Schneider naCloris "Beverly Ann Stickle" Leachman. Hazvina kunaka sepakutanga, asi Gungwa Placid 2 ichiri toni yekunakidzwa kweaschlocky - avo venyu vanofarira Sharknado mafirimu achave mariri. Buda Gungwa Placid 2 rudyi pano paCrackle.
Mukomana uye Imbwa Yake (1975), Courtesy LQ / JAF.
Mukomana uye Imbwa Yake
Mukomana uye Imbwa Yake ndeye 1975 post-apocalyptic bhaisikopo nezve, hazvo, mukomana uye imbwa yake. Mukomana nembwa vanotaurirana telepathically uye vanoita nzira yavo kuburikidza nehondo yenyukireya-yakaparadza nyika kudzamara vawana nzanga yepasi pevhu inoita kunge iri kubudirira. Nekudaro, vagari vacho vane zvakashata zvinokurudzira zvekuchengeta mukomana padhuze. Kubva pane bhuku raHarlan Ellison, Mukomana uye Imbwa Yake yakanyanya sci-fi pane kutyisa, asi ichiri kukosha wachi. Iyo imbwa yakanaka, uye mukomana anotambwa naDon "Sonny Crockett" Johnson. Unogona kuwana Mukomana uye Imbwa Yake pano paShoutFactoryTV.
Chii Chinomirira Pazasi (1984), neruremekedzo Mheni Vhidhiyo.
Chii Chakamirira Pazasi
Chii Chakamirira Pazasi iri nezveboka remasoja eAmerica anotumirwa kunoongorora kutsakatika kweredhiyo yakaiswa mubako rakadzika muCentral America nemauto eUS. Ndichiri kuongorora mumapako, timu iyi inowana rudzi rwevanhu vemuno maalbino avo vakagara mumapako kwezviuru zvegore, vasina kuzivikanwa nenyika yanhasi. Uyu musasa we1984 wakange wakanangana nenyaya yaFreddie Francis uye inotungamirwa naDon Sharp, saka ine chikoro chekare, 1950s sci-fi vibe kwairi, asi ichiri kuchema "kwakaitwa mumakore makumi masere!" Maona Chii Chakamirira Pazasi wega zvakanaka pano paYouTube.
Unoda mamwe emahara emafirimu? Buda yapfuura Tightwad Terror Chipiri pano chaipo.
Mukomana Uye Imbwa YakeCloris LeachmanCrackledon johnsondon sharpFreddie FrancisFreeFree MoviesMahara Mafirimu PamhepoHarlan EllisonJeffrey CombsJohn schneidergungwa rakadzika 2lance henriksenkukurudzira kukurudziraPumpkin musorosheedzera fekitari tvmusevestan winstontightwad terror chipiritubi tvtubitvvuduchii chakamirira pazasiYouTube
James Jay Edwards mutsoropodzi wefirimu uye pop tsika junkie muSan Diego, California. Iye inhengo ye SDFCS uye yeOFCS, uye anobata madhigirii efirimu kubva kuSDSU neASU. Iye anodawo mazita.
Guillermo del Toro Anouraya Yekupedzisira Tariro YeHellboy 3